Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare oo furtay Tababar lagu hormarinayo Waxbarashada reer miyiga. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ March 12, 2018
12/March/ 2018- waxaa saaka hoolka shirarka ee hotel hodon Fishka ka dhacay shirka wadatashiga barnaamijka horumarinta Waxbarashada reer miyiga oo ay kasoo qaybgaleen Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare iyo Agaasimaha ee Waaxda Waxbarashada Dadban ee Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinata sare dhamaan Gudoomiyaasha Waxbarashada Gobolada iyo Degmooyinka iyo Hay’adda UNICEF.
Hadaba Tababarkan ayaa waxaa Moepuntland.com uga warbixiyay madaxa Education Management Information System (EMIS) ee Xafiiska Wasaaradda Waxbarashada Mudane Mudane Jaamac Bulshaale isagoo sheegay in tababarkan ay ka soo qaybgaleen dhamaan Gudoomiyaasha Waxbarashada iyo degmooyinka oo islmarkaana , iyada oo ay casharada bixinayeen khabiiro u xeel dheer oo ka tirsan xafiiska Qorashaynta Waxbarshada iyo Waaxada Waxbarashada Dadban.
Waxa kalo kahadalay Tababarka siciid oo ka tirasan Hay’adda Unicef oo intaa kudaray inay bulshadu helaan Waxbarsho Tayeysan xaaladaha Waxbarashada reer miyigana lala socdo ,sidoo kale waxa u siciid UNICEF sheegay in qorshahan ay isticmalaan bulshada,dowlada iyo haayadahaba, kulana dardaarmay ka qayb galayasha inay si fiican uga faa idaystaan tababarka ilaaliyaan wakhtiga cashirka, Waxbarashada reer migana meel fiican marayso.
Waxaa kalo ka hadlay Tabarbarkan inta bari uu soconayo Agaasimaha Waxbarashada Dadban ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Malyuun Xuseen Jaamac oo barnamijkan Waxbarshada reer miya xafiiskeda laga maamulo. Iyadoo u mahad celisay hay’adaha kala shaqeyaa Waxbarshada Reer guuraaga sida Hay’addda Unicef, NRC, iyo Save the Children. Agaasime Malyuun xuseen Jaamac ayaa aad u aamaantay sida gudoomiyaasha waxbarshada iyo degmooyinka iyo kormeerayaasha Waxbarshada dadban sidii ay ku ajiibeen codsigii ka soo qaybgalka Barnamijkan hormarinta waxbarashada reer miyiga sidii ay uga wada shaqyn lahayeen ahmiyada uu leeyahay waxbarshada reer miyiga.
Shirkaas oo uu furay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare Maxamed Cali faarax (Farmaryeeri) ayuu si qoto-dheer uga warbixiyay dhibaatooyinkii ba’naa ee dhanka Waxbarashada reer miyiga ee deegaanka fog fog sidiii loo gaarsiin laha waxbarashada oo horay uga jiray isagoo sheegay in kadib markii salka loo dhigay Waxbarshada ugu danbayn hormar fiican laga gaaray sidii wax looga qaban lahaa horumarinta baahida aas-aasiga ah ee bulshada. Taasina ay keentay in la aas-aaso barnamijyo iyo siyaasadaha Waxbarashada ee deegaanka Reer miyiga oo nooc kasta oo qalab iyo shaqaale ahba loo dhamaystiray iyadoo Wasaaradda Waxbarashada kuguulaysatay waxqabadyo aan lasoo koobi karin.